Kulan Nabadeed Hordhac ah oo Dhexmaray Beelo wada dega goboka Karkaar – SBC
Kulan Nabadeed Hordhac ah oo Dhexmaray Beelo wada dega goboka Karkaar
Posted by Webmaster on October 29, 2011 Comments
Munaabadan ayaa waxaa kasoo Qaybgalay Masuuliyiin kasocota Dawlada Puntland Isimo culima awdiin iyo odayaal ka kala socday labada Beelood .
kulankan ayaa haa mid Hordhac u ahaa Heshiis waara oo ay gaaraan Labada Beelood ee Muuse saleebaan iyo Cali Saleebaan oo dhawaan uu Dagaal ku dhexmaray deegaano hoos Tag Gobolka kar kaar.
Ugu horayntii waxaa halkaasi kahadlay Gudoomiyaha Gobolka Bari mudane Cabdi Samad Maxamad Galan oo sheegya in ay tahay wax lagu farxo in ay Beelihii wax kala gaareen ay rabaan in ay wax walba ku dhameysataan wadahadal wuxuuna sheegay in Dagaalada u dhexeeya Beelaha ay yihiin Shirqoolo loo maleegay Beelaha walaalaha ah ee dega Gobolka Bari iyo Gobolada kalaba si ay uga mashquulaan in ay gacan kageystaan Horumarka Puntland iyo Jiritaankeedaba .
Ugaasa Xasan Ugaas Yaasiin oo kamid ah isimda ugu faca weyn Puntland oo madashaasi kahdlay ayaa sheegay in labada Beelood looga baahan yahay in ay iyagu Hirgaliyaan Heshiisyada ay Beeluhu wada gaaraan wuxuuna Ugaasku sheegay in loo baahan yahay in dadku ay isu Dulqaataan isuna Tanaasulaan.
Kulanku intii usocday waxaa mdaha ka hadlay laba oday oo ka kala socday Labada Qabiil ee Cali saleebaan iyo Muuse Salabeen oo halkaasi balanqaad kasaeeyay.
Nabadoon Axmad Xaaji Xasan oo Ku hadlayey Magaca Qabiilka Muuse Saleebaan ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin in ay fuliyaan wixii lagu Heshiiyo wuxuuna sheegay in ay alle hortiis ay balan qaadayaan in ay ilaaliyaan wixii laysku afgarto
Sidoo kale waxaa isna meesha kahadlay Nabadppn Xasan Ibraahi Bilcil oo isna ku hadlayey Magaca Beesha Cali Saleebaan ayaa isna dhankiisa sheegay in ay balan qaadayaan in ay sidaacad ah ay u hirgaliyaan wixii lagu Heshiiyo .
Wasiirka Arimha Gudaha iyo Dowlada Hoose ee Dawlada Puntland Gen Cabdullahi Jaamac ilka jiir oo isagu soo gaba gabeeyay kulankii nabadeea ayaa sheegay in labada beelood ayaa looga baahan yahay in ay hirgaliyaan wax yaalaha lagu heshiiyo .
wasiirka ayaa sheegay in aysan wax wanaagsan ahayn wixii dhexmaray labada beelood ee Cali saleeban iyo Muuse saleebaan wuxuuna sheegay in aysan waxaasi ahayn wax ay iskula kacaan dad walaalo ah wuxuuna wasiirku ale uga baryay labada beelood in ay Fahmaan walaaltinimada ka dhaxaysa .
27 Bishii 10 ayeey ahayd markii dagaal dhimasho iyo dhawac sababay uu dhexmaray belahan ayna ku dagaalameen deegaano hootaga Gobolka Kar Kaar .
Waxan joga magalada nrbi waxan ka mid ahay dadka sida weyn u milicsada bogan caalamiga ah ee sbc waxan ka codsan lahaa maamulka webka inay ka taxadaraan dhinaca qolaalka jumlooyinka oo marmarka qaarkood si kale loo fasiran karo mahadsanidiin
Hadii Loo fiirasadoh Degaan ahaan Muranka Beelaha ee Dhulka ama Daaqsinta ku Salaysan.Beelo Waxaa Jirah Deganadooda Aan Cidi la Degin micnaha Aan Lagu Dhex noolaankarin. Hadana Kuma Eka Deganada ay Gaarka u sheegtaan.
Beeshi ay la soo Degana waa ku Dhibaan la Deganaanshaha oo Markasta Gacan ka Hadal bay ka door bidan Nabad Wadaga.